Fomba 8 hananganana fifampitokisana amin'ny fifandraisana (+ fampiharana 8 fitokisana) - Fifandraisana
Fomba 8 hananganana fifampitokisana amin'ny fifandraisana (+ fampiharana 8 fitokisana)
Na vao tafaraka ianao na amin'ny fifandraisana maharitra izay mila fanamafisana kely dia ireto misy torohevitra tsara momba ny fananganana, sy ny fihazonana, ny fahatokisana ny vadinao.
Ireto no zavatra azonao atao manomboka manentana sy mamporisika azy ireo, na hevitra azonao iaraha-miasa.
mahatsapa aho fa tsy manana namana
Tadiavo izay mety aminao ary mifikitra eo! Ny fahatokisana dia momba ny fanoloran-tena maharitra sy maharitra, koa alao antoka fa ao anatin'ny fotoana maharitra ianao.
1. Miasà amin'ny fomba fifampiresahanao.
Ny fifandraisana dia fomba iray lehibe hananganana fahatokisana ny fifandraisanareo.
Midika izany fa mahita fomba sy fomba fifandraisana izay mety aminao, ary avy eo mitady fomba hitazomana sy hanaja izany.
Ny fifampiresahana dia mandeha lavitra noho ny fahafaha-manao resaka na fifanakalozan-kevitra fotsiny - ny fampahafantarana ny mpiara-miasa aminao ny tena fahatsapanao (bebe kokoa momba io ambany io!), Milaza izay ilainao sy tadiavinao amin'izy ireo, manaja azy ireo fa tsy manohana azy, ary mametraka sy manaraka ny fetra (averiko indray ny momba an'io!).
Mahazoa aina amin'ny fifandraisana. Mora be ity iray ity, raha ny teôlôjia, saingy mety hahatsapa ho toy ny fanamby izany raha faritra iray izay nitolomanao na ny namanao taloha.
Mampihatra milaza ny zavatra ilainao, na ny fahazoana fitiavana bebe kokoa amin'ny vadinao, na ny fametrahana fetra sasany hahafahanao mankafy fotoana irery.
Mety hidika izany raha miteny toy izao:
'Andro ratsy no nanjo ahy ary tiako ny mamihina raha afaka manome ahy ianao,'
'Tiako ianao, saingy mila toerana kely, ka hanao yoga irery aho anio hariva.'
Ity fomba fifandraisana ity dia tsara - tsy manome tsiny ny namanao izany, noho izany dia toa tsy hahatsapa ho voilikilika na tompon'andraikitra amin'ny toetranao izy ireo, ary mampiseho anao mametraka ny fetranao ary mangataka izay ilainao.
Fa ny serasera koa dia ny maheno izay lazain'ny olon-kafa, koa zatra mihaino - mihaino tokoa - amin'izay tadiavin'ny olon-tianao hita. Aza manelingelina, aza manandrana mamita ny eritreriny ho azy ireo - henoy fotsiny.
Izany dia hampiorina ny fahatokisana ny fifandraisanareo satria samy hahatsapa ianareo fa afaka maneho ny hevitrareo ary hahafantatra fa re ianareo. Mariky ny fanajana izany, ary ny fanajana dia iray amin'ireo fototry ny fahatokisana.
2. Mampihatra ny fanaovana ny marina.
Mety ho efa naminavina an'ity iray ity angamba ianao, fa raha misokatra foana momba ny zavatra tsapanao ianao dia tsy hanana fotoana hanontany tena momba ny zavatra tsapanao na izay mitranga ao an-tsainao ny olon-tianao.
Arakaraka ny fisokafanao, tsy tapaka, ny filàna tsy dia ilain'izy ireo hisalasalana na hanontaniany hoe manao ny marina amin'ny zavatra lehibe ianao.
Izany dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fahatokisan'ny namanao amin'izay lazainao, sy ny fihetsikao. Hesorina ny ahiahin'izy ireo raha afaka matoky anao izy ireo na tsia, satria ho fantatr'izy ireo fa milaza ny marina ianao.
Izany dia hamporisika ny sakaizanao hahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny fanehoana ny fihetseham-pony manokana, ary hanampy anao hatoky tena kokoa amin'ny fifandraisana.
Manomboha kely, ary sokafy ny fahatsapanao am-pahatsorana zavatra iray amin'ny tsatoka ambany kely amin'ny resaka fifandraisanao.
Midika izany fa tsy hanaiky tampoka fa mankahala ny ray aman-drenin'ny namanao ianao, aza adino ny zavatra ‘tsy dia manandanja loatra’, toy ny hoe ahoana no itiavanao rehefa mahandro curry fa tsy sakay, ohatra.
Mety ho toa adaladala be izany, fa hanampy anao hahazo aina amin'ny fanehoana ny tena fahatsapanao.
Hanjary hatoky tena bebe kokoa ianao rehefa miresaka ny marina, ary ho tsapan'ny vadinao fa ianao dia marina momba ny zavatra tsapanao.
Hanjary zatra anao izy ireo milaza ny marina fotsiny, ka tsy hahatsapa ny filàna izy ireo hanontany anao ireo zavatra lehibe kokoa, rehefa tonga izy ireo.
3. Manetre tena.
Rehefa eo amina fifandraisana vaovao ianao, indrindra, dia mety halaim-panahy tokoa ny handeha hivoaka sy hampiseho amin'ilay olona tianao ny mahavariana anao fotsiny.
Mety ho toa hevitra tsara ity, satria te-hanao fiheverana lehibe ianao, saingy mety hiafara amin'ny fahatsapana ho tsy fahatokisan-tena kely amin'ilay olona iray hafa na tsy fatokisany ny zava-mitranga.
wwe alatsinainy alina fisongadinana manta
Mety manomboka matahotra izy ireo fa matoky tena ianao, tsy dia mila azy ireo amin'ny fiainanao, ary hanomboka hanahy izy ireo sao holavinao.
Na dia nokasaina tsara aza izany, ny fahatokisanao dia mety hipoitra ho be hambo na matoky tena loatra amin'ireo izay miady amin'ny fahatokisan-tenany.
Avelao ny tenanao hanetry tena miaraka amin'ilay olona tianao. Ekeo izany, amin'ny maha-tenanao tena anao dia manokatra ny tenanao amin'ny fandavana ianao, fa koa amin'ny fifandraisana marina kokoa.
Avelao ianao ho adala sy hadalana ary hiresaka momba ireo zavatra mahaliana anao, na dia heverinao fa mety ho toy ny geeky aza ianao.
Izany dia hampiseho amin'ilay olona tianao, na ny sakaizanao, fa afaka mihomehy amin'ny volanao manokana ianao ary tsy variana amin'ny fahitan'ny olon-kafa anao.
Mety ho toa fomba hafahafa ny fananganana fifampatokisana nefa mandeha! Arakaraka ny ahitan'izy ireo anao amin'ny maha-ianao anao sy ny ahalalany fa mahazo aina ianao, dia hahatsapa fa hatoky anao izy ireo.
Tsy hatoky olona iray ianao KOA mahafatifaty, KOA fahalalam-pomba, KOA namboarina rahateo, marina? Mety ho azo inoana kokoa fa hatoky ilay olona nandehandeha sy nihomehy ianao, ary nahatonga anao hahatsapa ho mendrika sy omena lanja.
4. Mialà amin'ny lesoka nataonao.
Ity dia zavatra tokony hizoranao sy ny namanao, fa, raha ianao no mamaky an'ity, dia mety mila ilay olona ianao hanao ezaka bebe kokoa amin'ny voalohany hahazoana ny fihodinan'ny baolina.
Ny ampahany amin'ny fifandraisana madio sy matoky dia ny fanekena rehefa diso ianao.
Tsy mila atao amin'ny fomba manala baraka tena na maritiora izany, fa mila miaiky am-pahibemaso ianao rehefa nanao hadisoana na nanakorontana ny fahatsapana ny vadinao fa tsy antony fotsiny.
Amin'ny fanaovanao izany dia ampahafantarinao ny olon-tianao fa manome lanja azy ireo ianao ary henonao izany. Vonona ny hanaiky ianao fa diso ianao, na eo aza ny fihenan-tsoa mety hitranga amin'ny avonavom-ponao, ho an'ny tombo-tsoa lehibe kokoa sy ho an'ny fifandraisanao.
Mampiseho ny mpiara-miasa aminao fa miahy azy ireo ianao ary hanampy azy ireo hifampiresaka malalaka aminao kokoa. Raha fantatr'izy ireo fa hiala tsiny ianao ary hiresaka momba izany diso fanantenana na hivadi-pinoana dia hanolo-tena kokoa izy ireo hampandeha anao ny zavatra, ary samy afaka mifampatoky bebe kokoa ianao.
Raha tsy nifona mihitsy ny namanao noho ny nahasosotra anao dia tsy hatoky tena ianao amin'ny fifandraisana ary mety tsy te hatoky azy ireo amin'ny fonao.
Atombohy amin'ny fanekena ny zavatra tsapan'ny olon-tianao. Tombano raha izany na tsia dia zavatra efa nilalao anao na raha zavatra hafa izany.
Toa ifotony izany, fa ny mifantoka amin'ny fihetsiky ny namanao dia hanampy anao hanana fahatakarana lalindalina kokoa ny halehiben'ny fihetsem-pony, indrindra raha toa ka vaovao ihany ny fifandraisana.
Ekeo fa nandray anjara tamin'ny fahatsapan'izy ireo ratsy izy ireo, raha manana ianao, ary ampahafantaro azy ireo.
'Azafady fa nanao X aho ary nahatonga anao hahatsapa ho Y. Tsy hataoko intsony satria tsy te handratra anao aho.'
Misy zavatra manaraka ireto andalana ireto dia toerana tsara hanombohana raha tsy azonao antoka ny fomba hampitana an'ity karazana zavatra ity dieny izao.
Ampahafantaro azy ireo fa hitanao na henonao ny zavatra tsapany, azonao ny zavatra nataonao izay nahatonga azy io, ary hanao araka izay fara herinao ianao hisorohana an'izany.
Ny fanaovana izany rehefa mandeha ny fotoana dia hampiseho amin'ny namanao fa afaka matoky anao izy ireo, satria fantatr'izy ireo fa manana fahalalanao tena ianao hanaraha-maso ny fitondrantenanao manokana.
Ity koa dia fomba hafahafa fampidirana fetra amin'ny fifandraisanareo - indray, tsara raha mbola tsy niaraka ela be ianareo.
Ohatra, miala tsiny ianao amin'ny filalaovana olon-kafa rehefa mifanao fotoana voalohany ianao dia mampiseho azy ireo fa tsapanao fa tsy mety izany - izany dia mahatonga azy ireo hatoky tena fa fantatrao izao ny fetra sy ny maha-exclusité ny fiarahanareo. Manamafy ny fanoloranao tena ho an'ny namanao izany ary mitarika ho amin'ny fifandraisana mahasalama sy matoky.
Ny lakileny eto dia ny tena dikan'izany rehefa miteny ianao fa hiezaka ny tsy hamerina azy io intsony. Raha manohitra ny teninao foana ianao ary mamerina ireo lesoka mitovy amin'izany, dia hanimba ny fahatokisan'ny namanao anao amin'ny fomba lehibe izany.
manjaka ny usos sy romana
5. Mora malemy.
Ho an'ny maro amintsika, ny fitokisana dia miorina amin'ny fotoan-tsarotra. Izy io dia niforona sy natanjaka tamin'ny alàlan'ny fanamby, satria ireo no fotoana ahatsapantsika hoe iza no tena azontsika atokisana ary iza no afaka manohana antsika amin'ny fomba ilana fanohanana antsika.
Raha te hanana fitokisana bebe kokoa amin'ny namanao ianao dia afaka manomboka amin'ny alàlan'ny fahalemena kokoa. Midika izany fa avelanao hahita anao izy ireo rehefa sosotra ianao, ampahafantaro azy ireo izay atahoranao, ary avelao izy ireo handre ny fanahianao sy ny fanahianao.
Mety hahatsapa ho mampatahotra be ianao amin'ny voalohany, indrindra raha toa ianao ka tena vaovao momba izany amin'ny fiarahana. Saingy tsy ho ela ianao dia hahazo aina amin'ny tena maha-eo anao ny vadinao.
Hampahery azy ireo ihany koa ny hamela hiambina anao bebe kokoa miaraka aminao, satria ho tsapan'izy ireo ny fahatsapana fa manafaka sy milamina izany.
Arakaraky ny ahafantaranao fa samy ianareo ianareo no tsy dia misy tokony hatahorana - rehefa dinihina tokoa, raha samy madio sy tena izy ianareo, inona sisa no hafenina?
Manomboha kely, toy ny fanazaran-tena hatrany. Aza mijanona aorian'ny andro ratsy any am-piasana, ohatra, ambarao amin'ny vadinao ny fihetseham-ponao.
Raha manana andro mitebiteby ianao ary mahatsiaro ho somary nisintona na nampidirina an-tsokosoko dia avelao ho marefo eo anoloan'ny vadinao ianao amin'ny fanazavana azy ireo ny zavatra ataon'ireo fahatsapana ireo amin'ny toe-tsainao.
Arakaraka ny ahafahanao mamela ny fitandremanao sy ho tena tenanao (na dia mitomany ianao na miady saina na tezitra!), Vao mainka ianao mamela ny vadinao hahafantatra hoe iza ianao.
Raha ny fahatokisanao dia avy amin'ny tahotra ny fandaozana azy, ity fampiharana ity dia mety tena manampy koa! Raha vantany vao fantatrao fa ny namanao dia nahita ny lafiny rehetra aminao ary mbola misafidy ny hiaraka aminao izy ireo dia hahatsapa fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fifandraisana ianao satria tsy mitazona na manolotra kinova 'tsara kokoa' ho an'ny tenanao. Fantatrao fa ho anao izy ireo, ary izany no mahatonga ny fifandraisana feno fahatokisana sy fitiavana.
6. Hajao ny fetra - ny anao sy ny azy!
Zava-dehibe tokoa ny fetra amin'ny fifandraisana rehetra, fa indrindra amin'ireo izay misy ahiahy manodidina ny fahatokisana.
Raha te hanana fifandraisana matoky sy mahatoky ianao dia mila mahazo antoka fa manaja ny faritry ny namanao sahala amin'ny anao ihany!
Midika izany fa ny fahatakarana fa raha mila andro iray ho an'ny tenany izy ireo mba hanafiana sy hamerenana fotsiny dia tsy noho ianao io, ary tsy manondro ny fihetseham-pony ho anao.
Toy izany koa, midika izany fa mila manaja ny zavatra tsapanao ianao raha manomboka variana loatra amin'ny zavatra na mila toerana kely.
Arakaraky ny ahafahanao mifampiresaka ireo no mila mifampiresaka, dia tsy ianao manokana no handray izany raha mila fotoana fohy ny iray aminareo. Hanomboka hahatsapa ianao fa a) zon'izy ireo manokana ny maniry fotoana kelikely, ary b) tsara kokoa ho an'ny fifandraisana izany amin'ny fotoana maharitra.
Amporisiho ny mpiara-miasa aminao hilaza ny zavatra ilainy sy ny fetrany amin'ny fanaovanao izany ihany.
Manaova resaka marina amin'izy ireo alohan'ny hidirana tampoka 'Mila fotoana irery aho ary mila mivoaka ianao!' - matokia anay, tsy hidina tsara io.
Aleo kosa miresaka amin'ny vadinao ary alao antoka fa ampahafantarinao azy ireo fa zavatra azonareo atao roa atao ary samy mandray soa avy amin'izany.
Ampahafantaro azy ireo fa tsy ny fahatsapanao ny tsirairay avy, fa mahasalama ny fifandraisana izany ary hanatsara ny zavatra amin'ny fomba maharitra.
Avy eo manomboka miteny zavatra toy ny, 'Tsy dia mahatsiaro tena loatra aho, koa mieritreritra aho fa mety hijanona ato amiko anio hariva - fa andao hanao zavatra mahafinaritra miaraka rahampitso maraina.'
Tsara izany, satria mampahafantatra azy ireo izay ilainao (habakabaka) sy ny antony (tsy mahatsiaro 100% ianao) ary mbola mikarakara azy ireo ianao ary te handany fotoana miaraka amin'izy ireo amin'ny teny tsara kokoa (hanao zavatra miaraka tsy ho ela).
tokony hiala amin'ny quiz namako ve aho?
7. Miantso ny diso fanantenana.
Raha mandiso ny fanoloran-tena nataonao nifanaovanao foana ianao na ny olon-tianao, toy ny fihaonana hisakafo hariva na hisakafoanana fa resaka, samy tsy manaja ny fifandraisana ianareo roa.
Ny fahatokisana olona dia midika hoe mametraka azy ireo ny finoanao, izay mety ho sarotra rehefa manohy mamindra na manilika ireo zavatra izay tsapanao fa manan-danja izy ireo.
Mety tsy ho tsapan'ny olon-tianao ny maha-zava-dehibe aminao ny alina daty, ka mety hieritreritra izy ireo fa tsy maninona ny mandoa onitra indray mandeha.
Mety efa nilaza tamin'izy ireo ianao fa milamina miaraka aminy, na koa nilaza zavatra toy izany, 'Ie, reraka loatra koa aho andao hamerina hamerenana,' satria sosotra ianao ary te hanasa azy io ary hanao fihetsika tsy dia niraharaha anao.
Izany dia fanehoan-kevitra manara-penitra tsara, saingy mahatonga ny olon-tianao hieritreritra fa tsy niraharaha ianao, mba hahafahan'izy ireo manao izany indray nefa tsy mahasosotra anao.
Raha tsy miaina fanehoan-kevitra ratsy avy amin'ny zavatra iray izy ireo, dia tsy ho fantany izao ny hanao izany - misy dikany, marina?
Tsy misy olona mahay mamaky saina, ka ity fanazaran-tena ity dia mitaky fifampiresahana sy fanaovana ny marina momba ny fahatsapanao - lafin-javatra roa lehibe amin'ny fifandraisana matoky izay efa noresahintsika tetsy ambony.
Atombohy amin'ny filazanao amin'ny vadinao raha toa ka nahavita zavatra mahasosotra anao izy ireo. Tsy isaky ny mandeha, mazava ho azy, fa tsy rariny izany ary tsy azo tanterahina ny mieritreritra fa tsy hisy olona handratra ny fahatsapanao mihitsy!
Ampahafantaro azy ireo fa nanantena ny handany fotoana kalitao miaraka amin'izy ireo ianao, ary tianao ny hanajan'izy ireo ny fanolorantenan'izy ireo taminao.
Azonao atao ny manazava fa izany dia mahatonga anao hahatsapa ho sarobidy sy karakaraina ary tianao ny fiheverana azy ireo amin'ny fiainany.
Arakaraka ny ahafahanao zatra mizara ireo fahatsapana ireo sy manome toky fa samy hanaja ny toky nataonao ianao, dia vao mainka hatoky anao miaraka amin'ny vadinao.
8. Makà fotoana.
Tsy hitranga tampoka ny fitokisana!
Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia mety noho ianao miahiahy momba ny fifandraisanao, na satria nisy zavatra nitranga tamin'ny vadinao taloha mba hahatonga anao hametra-panontaniana hoe hatraiza no azonao atao, na tokony hatoky azy ireo.
Tadidio fa ny fananganana fahatokisana amin'ny fifandraisana ary ny famerenana ny fahatokisana ny vadinao dia mety maharitra fotoana kely.
Tsy ‘tsy mahomby’ na ‘tsy mifanentana’ ianao raha tsy hoe maka azy miadana sy mifankahalala, ary ny fifandraisana, amin'ny hafainganan anao.
Ny fahatokiana izay namboarina rehefa mandeha ny fotoana dia mitaky faharetana ary tsy resaka fihetsika lehibe sy tantaram-pitiavana iray, fa momba ny fomba kely sy isan'andro izay anehoanareo sy ny vadinao fifampitokisana.
Tsy misy maika raha ny fahatokisana ny fifandraisana no resahina, koa araraoty ny fotoana ary mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha mifanaraka aminao. Tadidio fa afaka miresaka amin'ny namanao momba an'io koa ianao!
Raha tokony hiasa mamakivaky an'ity lisitra ity indray mandeha ianao ary manantena ny ‘fifandraisana tonga lafatra’ mandritra ny alina, dia mitoera am-piheverana hatrany amin'ny zavatra antenainao.
Amin'ity fomba ity, azonao atao ny mitantana ny fanantenanao, fa tsy mahatsiaro ho diso fanantenana sy sosotra na sosotra, azonao atao ny mijery ny fifandraisanareo mitombo mandeha ary avy amin'ny hery mankany amin'ny tanjaka.
hevitra momba ny zava-misy mahaliana momba ahy
Tadidio fa tsy mitovy ny olona rehetra, toy ny fifandraisana rehetra. Na dia mety hitanao aza fa mihatra aminao ny zava-drehetra ato amin'ity lahatsoratra ity, dia mety hahita ny lalanao manokana miaraka amin'ny namanao ihany koa ianao.
Ity torolàlana ity dia natao hanampiana, ary koa teboka fandinihana. Raha tokony hampiasa azy io ho lisitra fizahana dia ampiasao izy io ho toy ny loharanom-pahalalana hidirana ao anaty ary hieritreritra lalina kokoa momba izay tena tadiavinao - ary inona no tena dikan'ny hoe 'fahatokisana' aminao.
Azonao atao ny mamaky izany ary mahatsapa fa ianao sy ny olon-tianao dia efa mahay mametraka fetra, ary efa tena mandeha tsara ny fifandraisanareo.
Amin'ny fananana an'io eritreritra io dia hahatsapa fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fifandraisanao ianao, satria fantatrao fa efa nanorina fototra lehibe amin'ny fitiavana sy fahatokisana ianao.
Tsarovy fa ianao sy ny namanao dia miaraka amin'izany, ary azonao atao ny manao izany dia ho fandinihana sy fanoloran-tena miaraka, na izany aza mitady anao.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hiasana amin'ny fitokisana amin'ny fifandraisanareo? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra zavatra na amin'ny tsirairay na amin'ny mpivady. Tsotra.
Ahoana ny fomba hanarenana sy hamerenana ny fitokisana aorian'ny lainga: 10 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
AHOANA FOMBA FAHATIAINANA ATAO AMIN'NY OLONA REHETRA: Fomba 10 hianarana hatoky olona
Olana famantarana famantarana 7 + fomba 11 hialana amin'izy ireo
Ahoana ny fomba hiatrehana ny mpiara-miasa izay tsy matoky anao: Dingana manan-danja 4!
Dingana 9 hiatrehana ny famadihana ary hialana amin'ny ratra
Maninona ny lainga amin'ny tsy fanarahana no manimba sy manimba fifandraisana
Dingana 17 hamelana ny namana mpamitaka ary hialana amin'ny fivadihana
mijery aza miaina an-tserasera maimaimpoana
ahoana no itiavako
inona no hatao rehefa mankaleo amin'ny namanao akaiky indrindra
inona no mitranga rehefa manambaka mpihaza ianao
raiki-pitia psikolojia haingana loatra
tsy te ho lehibe mihitsy aho